It is me. Ko Niknayman.: ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများက သက်သေပြလို့ နေပါတယ်။ ပြည်သူ့ ဆန္ဒအမှန်ကို။ (၂၃.၀၉-.၀၇)။
Posted by Ko Niknayman at 6:18 AM